मेरो Pinterest खाता मा मेरो इन्स्टाग्राम खाता कसरी लिंक गर्ने? ➡️ अनुयायी ▷
वर्तमान दैनिक जीवन संसार मा एक माईलस्टोन हो, विश्वव्यापी अवस्थित स्थिति को कारण, महामारी र पक्कै पनि निवारक सामाजिक अलगाव, उनीहरु हामी मध्ये धेरै को जीवन परिवर्तन गरीएको छ, पहिले नै व्यावहारिक हामी सामाजिक सञ्जाल बाट सबै गर्छौं। यो उपकरण हामी हाम्रो परिवार, साथीहरु र संसार को बाकी संग कुराकानी गर्न को लागी छ।
Pinterest यस बारे मा सजग छ र यही कारण हो यसको प्रयोगकर्ताहरु संग सम्बन्धित को विकल्प प्रदान गर्दछ अन्य सामाजिक सञ्जालहरु संग उनको खाता, जसले उनलाई विश्वव्यापी मनपर्ने नेटवर्कहरु को बीच स्थिति मा योगदान गरेको छ। अर्को, हामी तपाइँलाई कसरी अन्य सामाजिक सञ्जाल संग तपाइँको Pinterest खाता सम्बद्ध देखाउने छ।
यो याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ:
प्रत्येक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म यो एक विशेष तरिका मा डिजाइन गरीएको छजे होस् उनीहरु समान संचार लाभ प्रदान गर्दछन्, उनीहरु एउटै प्रोटोकल द्वारा शासित छैनन्।
माथिको कारण हो कि किन सामाजिक नेटवर्क को प्रत्येक विशिष्ट कार्यहरु छन् कि यो यसको मूल स्पर्श र अरु बाट मतभेद दिनुहोस्। यो पनी यसको आफ्नै भाषा छ, जो Pinterest संग हुन्छ।
आन्तरिक नियमहरु सामाजिक सञ्जाल को प्रत्येक, यद्यपि उनीहरु मूलतः उस्तै छन्, उनीहरुका फरक फरक छन् र धेरैले निश्चित सामग्री साझा गर्न अनुमति दिदैनन् कि अरुले गर्छन्।
यी कारणहरु छन् किन खाताहरु संग सम्बन्धित छन् वाणिज्यिक हुन्।
Pinterest संग सामाजिक सञ्जाल कसरी सम्बद्ध गर्ने:
WhatsApp को मामला मा:
यो सामाजिक सञ्जाल छ Pinterest संग साझेदारी को विकल्प उत्तरार्द्ध को मंच बाट, तपाइँ निम्नानुसार यो गर्नुहुन्छ:
लग इन गर्नुहोस् तपाइँको Pinterest खाता मा।
तीन अंक (···) पत्ता लगाउनुहोस् आवेदन पृष्ठ मा।
एकचोटि तपाइँ यो विकल्प छान्नुहोस्, मेनु विकल्प प्रदर्शित हुनेछ, यिनीहरु बीच तपाइँ पत्ता लगाउनुहुनेछ र तपाइँ एक कि मिल्दो छान्नुहुनेछ खाता सेटिंग्स सम्पादन गर्न।
थिच्नुस जडान खण्ड, यो तपाइँ अनुप्रयोगहरु कि तपाइँ लिंक गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाट्सएप आइकन को विकल्प को एक श्रृंखला दिनेछ।
अब विकल्प मा क्लिक गर्नुहोस्
सुरक्षा कारणहरु को लागी प्रणाली लि confirm्क को पुष्टि गर्न को लागी सोध्नेछ, स्वीकार गर्न को लागी विकल्प थिच्नुहोस् र त्यसैले तपाइँ दुबै खाताहरु लाई लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ यो कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल तपाइँ चाहानुहुन्छ र Pinterest तपाइँ संबद्ध गर्न को लागी विकल्प दिन्छ
फेसबुक को मामला मा:
मुख्य खोज इन्जिन पत्ता लगाउनुहोस् फेसबुक.
एक पटक तपाइँ मुख्य फेसबुक पेज मा हुनुहुन्छ, पृष्ठ को खोज इन्जिन मा जानुहोस्।
प्रणालीलाई भन्नुहोस् फेसबुक को हो कि तपाइँ यो खाता Pinterest खाता संग सम्बन्धित हुन चाहानुहुन्छ।
एक पटक तपाइँ खाता छान्नुहोस् फेसबुक तपाइँ लिंक गर्न चाहानुहुन्छ, वैकल्पिक विकल्प थिच्नुहोस्।
फेसबुक प्रणाली जो तपाइँको Pinterest पृष्ठ को ठेगाना हो, त्यो हो, तपाइँको उपयोगकर्ता नाम बताउनुहोस्।
प्रणाली तपाइँ एक निश्चित को लागी सोध्नेछ जानकारी जो तपाइँ प्रदान गर्नु पर्छएकचोटि तपाइँ अनुरोध गरिएको जानकारी पूरा गर्नुभयो, परिवर्तनहरु बचत मा क्लिक गर्नुहोस्। र भोइला, तपाइँ यी खाताहरु लाई लिंक गर्नुभएको छ।
1 यो याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ:
2 Pinterest संग सामाजिक सञ्जाल कसरी सम्बद्ध गर्ने:
3 फेसबुक को मामला मा: